theZOMI: [mrsorcerer:38106] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ဆိုလာအကြောင်း သိမှတ်စရာဗဟုသုတ
[mrsorcerer:38106] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ဆိုလာအကြောင်း သိမှတ်စရာဗဟုသုတ
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ဆိုလာအကြောင်း သိမှတ်စရာဗဟုသုတ
နေရောင်ခြည်အလင်းစွမ်းအင်မှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော နည်းပညာ ဖြစ်ပါ သည်။ နေအလင်းရောင်တွင်ပါဝင်သော အလင်းမှုန်များမှ ဆိုလာပြား အတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်မှုန်များကို ရိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဆိုလာဆဲလ် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ဆိုလာဆဲလ် ဆိုသည်မှာ အလင်းစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသောအရာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆဲလ်များသည် မည်သည့် စွမ်းအင် ကိုမျှသိုလှောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် မည်သည့်အလင်းရောင် (နေရောင်ခြည်) မှမရရှိတော့သည့်အခါ ဆဲလ်အတွင်း၌ လျှပ်စစ် စီးဆင်းမှု မရှိတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ညဘက်ပိုင်းတွင် လိုအပ်ခဲ့ပါက လျှပ်စစ်စွမ်းအား သိုလှောင်ထားနိုင်သည့်အရာ (အဓိကအားဖြင့်) ဘက္ထရီနှင့်ချိတ်ဆက် တပ်ဆင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
၃။ ဆိုလာဆဲလ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
အလင်းမှုန်များသည် ဆီလီကွန်အက်တမ်များမှ ပိုလျှံနေသော လျှပ်စစ်ဓါတ်မှုန်များကို ရိုက်ခတ်ကာ လျှပ်စစ်ဓါတ်မှုန်များကို ထွက်ရှိလာစေပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်မှုန်များ ထွက်ရှိရာမှ လျှပ်စစ်ဗို့အားထွက်ပေါ် လာပါသည်။ အတွင်းပိုင်း လျှပ်စစ်စက်ကွင်းသည် ဆဲလ်၏ရှေ့မျက်နှာပြင်ရှိ လျှပ်စစ်ဓါတ်မှုန်များကို တွန်းကန်စေခြင်းဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် အခြားဆဲလ် (သို့) အသုံးပြုမည့် နေရာများဆီသို့ ဆက်လက် စီးဆင်းသွားခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ ထိုသို့လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ပေးရာတွင် ဆိုလာဆဲလ်များသည် မည်သည့်အခါမျှ လျှပ်စစ်ဓါတ်မှုန်များကို ကုန်ဆုံးသွားစေခြင်းမရှိပါ။
၄။ ဆိုလာဆဲလ် အမျိုးအစား ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
ဆိုလာလျှပ်စစ်ပြား အမျိုးအစားများမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
a. Monocrystalline Silicon
b. Poly or multicrystalline Silicon
c. Ribbon Silicon (one type of multicrystalline Silicon)
2.Thin Filim Solar Cell
a. Cadmium Telluride Solar Cell
b. Copper Indium Gallium Selenide Solar Cell
c. Gallium Arsenide Multijunction Solar Cell
d. Light-absorbing dyes (DSSC) Solar Cell
e. Organic/Polymer Solar Cell
f. Silicon Thin-Film Cells
i. Amorphous Silicon
ii. Photocrystalline Silicon
iii. Nanocrystalline Silicon
၅။ ဆိုလာစနစ်ကို ဘာကြောင့်သုံးမှာလဲ။
• ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မကုန်ခမ်းနိုင်ဘဲ အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း။
• အလင်းမှလွဲ၍ အခြားလောင်စာ မလိုအပ်ခြင်းကြောင့် ရေရှည်တွင် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း။
• ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ - စသည်တို့ကြောင့် ဆိုလာလျှပ်စစ်စနစ်ကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
၆။ ဆိုလာလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုသုံးမှာလဲ။
ဆိုလာပြားမှ ရရှိလာသော ဒီစီလျှပ်စစ်စွမ်းအားကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနည်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘက္ထရီတွင် သိုလှောင်၍လည်းကောင်း၊ မိမိလိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၇။ ဆိုလာစနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော အကျိုးကျေးဇူးများမှာ
• ဆိုလာစနစ်သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြစ်၍ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မကုန်ခမ်းနိုင်ဘဲ အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း။
• ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့မထွက်ရှိ၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲစိမ်းလန်းနေစေခြင်း။
• အလွယ်တကူ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
• ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
• လှုပ်ရှားမှု အစိတ်အပိုင်းလုံးဝမပါသဖြင့် ဆူညံမှု မရှိခြင်း။ ချွတ်ယွင်းပျက်ဆီးမှု နည်းပါးကာ နှစ်ရှည်
အသုံးပြုနိုင်ခြင်း နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စရိတ်မရှိခြင်း စသည့်ကောင်းကျိုးများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
၈။ ဆိုလာကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အသုံးပြုရန် လွယ်ကူပါသလား။
ဆိုလာကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အသုံးပြုရန် လွယ်ကူပါသည်။ ဆိုလာစနစ်သည် အလွန်ရိုးရှင်းသော စနစ်ဖြစ်၍ အတွင်းပိုင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုအစိပ်အပိုင်းမပါရှိခြင်းကြောင့် ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နည်းပါးပြီး၊ ဆိုလာပြားပေါ်တွင် ဖုန်မှုန့်များနှင့် တခြားနေရောင်ခြည်ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအရာများ ဖုံးလွှမ်းနေမှသာ ရေဆေးပေးရန် (သို့)ဖယ်ရှားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၉။ ဈေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။ ဈေးကြီးသလား။
ဈေးနှုန်းသည်ဆိုလာပြားအရွယ်အစားနှင့် အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပါသည်။ ယခုချိန်တွင်ဆိုလာ၏ဈေးနှုန်းမှာ ကြီးမြင့်ခြင်းမရှိတော့ပါ။
၁၀။ ဆိုလာပါဝါနှင့် TV ကြည့်လျှင် မည်သည့်ဆိုလာပြား အရွယ်အစားကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပြီး၊ နာရီမည်မျှ အသုံးပြု နိုင်မည်နည်း။
ဆိုလာပြားအရွယ်အစားနှင့် အသုံးပြုနိုင်မည့်အချိန်မှာ မိမိအသုံးပြုမည့် TV အရွယ်အစား အပေါ်တွင် မူတည် ပါသည်။
ဥပမာ။ ။ ၁) 21" CRT Colour TV (AC) တစ်လုံးကို တစ်နေ့(၂)နာရီ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက 70Watt ဆိုလာပြား (၁)ချပ် လိုအပ်ပါသည်။
၂) 21" CRT Colour TV (AC) တစ်လုံးကို တစ်နေ့(၄)နာရီ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက 70Watt ဆိုလာပြား(၂)ချပ် လိုအပ်ပါသည်။
၃) 21" LCD Colour TV (AC) တစ်လုံးကို တစ်နေ့(၂)နာရီ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက 50Watt ဆိုလာပြား(၁)ချပ် လိုအပ်ပါသည်။
၁၁။ ဆိုလာစနစ်အား မီးထွန်းရန်အတွက်သာ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက နာရီဘယ်လောက် အသုံးပြုနိုင်မလဲ။
သုံးစွဲနိုင်သော နာရီအချိန်သည် မိမိသုံးစွဲမည့် မီးချောင်း(သို့)မီးလုံး အရေအတွက်နှင့် အသုံးပြုထားသော ဆိုလာပြားအရွယ်အစား ပေါ် မူတည် ပါသည်။ ဥပမာ
၁။ ၅၀-၀ပ် ဆိုလာပြားနှင့် ၂၀-၀ပ် မီးချောင်း(၁)ချောင်း အသုံးပြုမည်ဆိုပါက တစ်နေ့၁၀နာရီ မီးထွန်းနိုင် ပါသည်။
၂။ ၅၀-၀ပ် ဆိုလာပြားနှင့် ၂၀-၀ပ် မီးချောင်း(၂)ချောင်း အသုံးပြုမည်ဆိုပါက တစ်နေ့ ၅နာရီ မီးထွန်းနိုင် ပါသည်။
၃။ ၉၀-၀ပ် ဆိုလာပြားနှင့် ၂၀-၀ပ် မီးချောင်း(၄)ချောင်း အသုံးပြုမည်ဆိုပါက တစ်နေ့ ၄နာရီခွဲ မီးထွန်းနိုင် ပါသည်။
၁၃။ ဆိုလာစနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမည်မျှ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည်နည်း။
ဆိုလာစနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရုံအဆင့်ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင် ပါသည်။
၁၄။ ဆိုလာစနစ်ဖြင့်မီးထွန်းလျှင် အလင်းအား မည်မျှလင်းမည်နည်း။
အလင်းအားသည် ဆိုလာစနစ်ပေါ်တွင် မူတည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိမိအသုံးပြုမည့် မီးချောင်း (သို့) မီးလုံး၏ အလင်းအားထုတ်လွှတ် ပေးနိုင်ခြင်းပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
၁၅။ အဲယားကွန်းနှင့် ရေခဲသေတ္တာတွေကို ဆိုလာစနစ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
အဲယားကွန်းနှင့် ရေခဲသေတ္တာတွေကို ဆိုလာစနစ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆိုလာပြားအမြောက် အများလိုအပ်ပါသည်။
၁၇။ ဆိုလာပြားသည် အလွယ်တကူပျက်စီးနိုင်သလား။
သာမာန်အားဖြင့် ဆိုလာပြားသည် အလွယ်တကူမပျက်စီးနိုင်ပါ။ သို့သော် ဆိုလာပြားများအားသယ်ယူစဉ် နှင့် တပ်ဆင်ချိန်များတွင် ဂရုတစိုက် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၁၈။ ဆိုလာစနစ် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက တစ်နေ့လျှင် နေရောင်ခြည် မည်မျှလိုအပ်မည်နည်း။
ဆိုလာတပ်ဆင်မည့်နေရာသည် တစ်နေကုန် နေရောင်ခြည်ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့တစ်နေကုန် နေရောင်ခြည်မရရှိပါက ဆိုလာပြားမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအားအပြည့်အ၀ ထုတ်ယူရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၉။ တစ်ပတ်လုံး တိမ်ထူနေ့များ (သို့) မိုးရွာနေ့များတွင် ဆိုလာစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်သလား။
သာမာန်အားဖြင့် တိမ်ထူသောနေ့များ(သို့) မိုးရွာသောနေ့များတွင် ဆိုလာမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အ၀ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် အချို့သောနေရာဒေသများတွင်မူ တိမ်ထူသောနေ့များနှင့်မိုးရွာသော နေ့များတွင်လည်း အပြည့်အ၀ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
၂၀။ မည်သည့်နေရာဒေသများသည် ဆိုလာစနစ်အား အသုံးပြုရန် ပိုမိုသင့်တော်သနည်း။
နေရောင်ခြည်ကောင်းကောင်းရရှိနိုင်သော မည်သည့်နေရာဒေသတွင်မဆို ဆိုလာစနစ်အား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၂၁။ ဆိုလာစနစ်တွင် ဘက္ထရီနှင့် အင်ဗာတာများ လိုအပ်ပါသလား။ ဘာကြောင့်လိုအပ်ပါသနည်း။
ဆိုလာစနစ်တွင် ဘက္ထရီ၊ အင်ဗာတာများ လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်နေရောင်ခြည်မရရှိနိုင်သောညအခါတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်ယူအသုံးပြုရန်အတွက် နေ့အချိန်တွင် ဆိုလာစနစ်မှထုတ်ပေးသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အား သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းထားရန် ဘက္ထရီလိုအပ်ပါသည်။ ဆိုလာစနစ်မှ ထုတ်ယူရရှိသော လျှပ်စစ်ဓါတ်မှာ ဒီစီလျှပ်စစ်စနစ်ဖြစ်၍ အေစီလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအသုံးပြုရန်အတွက် အင်ဗာတာ လိုအပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၂၂။ ဆိုလာတပ်ဆင်ခြင်းသည် လွယ်ကူသလား။ ခက်ခဲသလား။
ဆိုလာတပ်ဆင်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး၊ အသုံးပြုရသည်မှာလည်း လွယ်ကူပါသည်။
၂၅။ ဆိုလာနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းကို အားဖြည့်ပေးနိုင်သလား။
ဆိုလာနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းကို အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆိုလာနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းကြားတွင် အားသွင်းထိန်းညှိစက် တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၂၆။ အားဖြည့်နေချိန်တွင် မီးထွန်းနိုင်သလား။ အသုံးမပြုနိုင်လျှင် ဘာကြောင့်လဲ။
အားဖြည့်နေချိန်တွင် ထုတ်မသုံးဘဲနေခြင်းသည် အကောင်းဆုံးပင် ဖြစ်သည်။ ထုတ်သုံးလျှင် သင်၏ဘက္ထရီသည် အားမပြည့်နိုင်ပေ။
၂၇။ ဘက္ထရီကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုမို၍အားသွင်းမိလျှင် ပေါက်ကွဲတတ်သလား။
အားသွင်းထိန်းညှိစက်အသုံးမပြုပဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အားသွင်းမိလျှင် ဘက္ထရီအားထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
၂၈။ ဘက္ထရီအား လွန်၊မလွန် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
သာမာန်အားဖြင့် အလွယ်တကူမသိနိုင်ပါ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအားသွင်းစဉ် ဘက္ထရီအိုးပူလာပြီး အနံ့တစ်မျိုးမျိုး ထွက်လာပါက အားလွန်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
၂၉။ ဆိုလာအတွက် မည်သည့်ဘက္ထရီအမျိုးအစားကို ပိုမိုရွေးချယ်သင့်သလဲ။
Deep Cycle Maintenance Free Sealed Lead Acid Battery သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၃၀။ Charge Controller ဆိုတာ ဘာလဲ။
Charge Controller ဆိုသည်မှာ ဘက္ထရီအား အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး အားသွင်းခြင်းအား ထိန်းညှိပေး သောစက် ကိရိယာဖြစ်ပါသည်။ ထိုကိရိယာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘက္ထရီအားသွင်းစဉ် အားလွန်ခြင်းမဖြစ်ပေါ် နိုင်၍ အားလွန်ခြင်းကြောင့် ဘက္ထရီပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ် ပေးပါသည်။
၃၁။ Charge Controller ဘာကြောင့် အသုံးပြုရတာလဲ။
သင်သည် ကျွမ်းကျင်သော လျှပ်စစ်ပညာရှင်တစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့လျှင် ဘက္ထရီအားပြည့်၊ မပြည့်အလွယ်တကူ သိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကြောင့် အားလွန်သွားခဲ့လျှင် သင့်၏ဘက္ထရီ ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် Charge Controller ကို အသုံးပြုရပါသည်။
၃၂။ Charge Controller ကို အသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုလျှင် ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။
သင်သည် ကျွမ်းကျင်သော လျှပ်စစ်ပညာရှင်တစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့လျှင် လျှပ်စစ်အကြောင်း တတ်ကျွမ်း နားလည်သော ပညာရှင်တစ်ယောက် ကိုခေါ်၍ ဘက္ထရီအားသွင်းစဉ် အစဉ်အမြဲစောင့်ကြည့်ခိုင်းထားရပါမည်။
http://lovemusicbirds.ning.com/profiles/blog/show?id=6480001%3ABlogPost%3A391192&xgs=1&xg_source=msg_share_post မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 5/02/2013 10:35:00 PM